चिकित्सक संघको सरकारलाई चेतावनीे– दुईतिहाईको दम्भ नदेखाऊ, केसीका माग पूरा गर ! « GDP Nepal
चिकित्सक संघको सरकारलाई चेतावनीे– दुईतिहाईको दम्भ नदेखाऊ, केसीका माग पूरा गर !
Published On : 13 January, 2019 10:28 pm
काठमाडौं । नेपाल चिकित्सक संघले दुईतिहाईको दम्भ नदेखाउन सरकारलाई चेतावनी दिँदै अनसनरत चिकित्सक प्रा. डा. गोविन्द केसीको माग पूरा गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
संघका अध्यक्ष डा. मुक्तिराम श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बेलैमा अनशनरत डाक्टर गोविन्द केसीको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेका छन् ।
उनले भने– प्रधानमन्त्रीलाई गलत सल्लाह नदिन म नेकपाका सांसदहरुलाई आग्रह गर्दछु । वार्ता समिति बनाएर वा आँफै पहल गरेर भएपनि प्रधानमन्त्रीज्यूले डा. केसीको माग सम्बोधन गर्नुहोस भनेर म यही मञ्चबाट आग्रह गर्दछु ।’
आइतबार रिपोर्टर्स क्लबमा अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री ओलीले डाक्टर केसीको माग सम्बोधन गर्न समयमै दिमाग र आँखा खोल्नुपर्ने पनि बताए । सरकारले दुईतिहाईको दम्भ देखाउन नहुने उनको सुझाव छ ।
सरकारले कु–सोच राख्न नहुने धारणा उनले राखे । उनले भने– आवश्यक पर्यो भने हामी पनि चुप लागेर बस्दैनौं । हामी कम बोल्छौं तर काम गरेर देखाउँछौं ।’ सरकारले अहिले दम्भ र उत्तेजना देखाउन बेला नभएको पनि उनले तर्क गरे ।
गोविन्द केसी सरकारी कर्मचारीमात्रै नभएर तीन करोड नेपालीहरुको अभियन्ता पनि भएको श्रेष्ठले बताए । उनले भने,‘जनताले संघर्ष गर्दा मुलुकमा भएका शक्तिशाली संस्थाहरुपनि धराशयी भएका ईतिहाँस छ ।’
उनले आफूहरु डाक्टर केसीको पृष्ठपोषक नभएको पनि जिकिर गरे । श्रेष्ठले भने–डाक्टर केसीले उठाएका मागहरु त कम्युनिष्ट सरकारले उठाउनुपर्दथ्यो । कम्युनिष्ट सरकारले उठाउनुपर्ने कुरा उठाईदिनुभएको छ । उनले डाक्टर केसी संघको आजिवन सदस्य भएकोले उनको जीवन रक्षाको लागि सरकार गम्भिर बन्नुपर्नेपनि बताए ।
वर्तमान सरकारले डाक्टर केसीसँग सम्झौता गरेको तर कार्यान्वयन नगरेकोमा उनले गुनासो पोखे । उनले भने– सरकारले कि नसक्ने भए हामी सक्दैनौं भनेर पहिल्यै भन्नुपर्दथ्यो । तर, सम्झौता गरेपछि लागु गर्नुपर्छ ।
पत्रकार महासंघमा आज देशैभर एकसाथ निर्वाचन, भोलिसम्म नतिजा
काठमाडौं । नेपाली सञ्चारकर्मीको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासङ्घमा नयाँ नेतृत्वका लागि बुधबार निर्वाचन हुँदैछ
योगेश भट्टराईका विश्वासपात्र बलबहादुर तामाङ कांग्रेस प्रवेश !
काठमाडौं । नेकपा एमाले ताप्लेजुङका नेता बलबहादुर तामाङ नेपाली कांग्रेस प्रवेश गरेका छन् । तामाङ
देशैभर वायु प्रदूषणको सकस, यस्ता रोगको जोखिम बढी छन् !
काठमाडौं । विगत चार दिनयता मुलुकभर वायु प्रदूषण फैलिएको छ । प्रदूषणको एकीन कारण थाहा
रहेनन् लोकप्रिय नेता जोशी, उपमेयरदेखि उद्योग मन्त्रीसम्म सधैँ जनप्रिय छवि !
काठमाडौं । नेपाल कांग्रेसका युवा नेता नवीन्द्रराज जोशीको निधन भएको छ । एक महिनादेखि नर्भिक